Porn ကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော Flatline (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
porn ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် The Mystery Flatline (2013)
" ပင်ပန်းနွမ်းနယ်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအပြုအမူသည်တည်မြဲသော်လည်းလုံးဝမပြောပေ။
"Flatlines ... သူတို့ရေတွင်း၏အောက်ခြေမှာဖြစ်ခြင်းနှင့်သင်ထွက်ရရန်မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးစဉ်းစားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ ... ။ ထို့နောက်တနေ့ရုံနှိုးထထွက်ဖြစ်ခြင်း။ ဒါကြောင့်အေးဆေးငြိမ်ငြိမ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့အေးချမ်းငြိမ်သက်မှုရှိတဲ့အေးချမ်းငြိမ်သက်တဲ့တိုက်ခန်းအိမ်တွေကိုကြိုးစားပြီးစမ်းကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ blog post: Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ် တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောဖြစ်ရပ်ကိုဖော်ပြသည် - အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်များတွင်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားများသည်အသက် ၄၀ နှင့်အထက်များရှိယောက်ျားများထက်သူတို့၏လိင်ကျန်းမာရေးကိုလပေါင်းများစွာကြာအောင်လိုအပ်သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ၊ ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားများသည် porn-related ED မှပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါများသောအားဖြင့်အများအားဖြင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသောယာယီ“ flatline” (libido သုည၊ “ dead-dick”) တွင်ကြာကြာနေလေ့ရှိသည်။ flatline ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။
နစ်ခ်: ဦးနှောက်ဝုန်းဒိုင်းကြဲ (မတရားသော) ၏ရက်အနည်းငယ်ပြီးနောက်, ငါရက်သတ္တပတ်များအတွက် flatline သို့သွားလေ၏။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်မမိန်းကလေးငယ်များ, လိင်, အရာအားလုံးအကြောင်းကိုလုံးဝလစျြလြူရှုခံစားရတယ်။ အဆိုပါ porn သားရဲတကောင်ကနေအနည်းငယ်သောစကားသံကိုအကြှနျုပျစိတျကို၏နောက်ကျော၌ငါ့ကိုမှာ nagged, ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်ကျနော့်ကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ အကြှနျုပျ၏လိင်တံအလွန်ကျမဲ့အငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုငါ့လိင် drive ကိုထောက်ပံ့ပေးသမျှစက်ပေါ်တွင် plug ကိုဆွဲလိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အားလုံးမှာအဘယ်သူမျှမလိင်စိတ်။
အာရုန်သည်: (အသက် ၂၂ နှစ်) ကျွန်ုပ်သည် porn / masturbation မှထွက်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါတိုင်း 'သေသောလိင်တံ' ရောဂါလက္ခဏာကိုသတိပြုမိသည်။ 22-4 ရက်ခန့်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏လိင်အင်္ဂါသည်လုံးဝသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခံရပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အချည်းနှီးဖြစ်သွားသည်။ တကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်
ပြောစရာမလိုတော့ဘူး၊ ယောက်ျားတော်တော်များများကဒီကိစ္စမှာပြန်လည်သက်သာလာပြီးသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုအမြန်ဆုံးပြန်သွားကြပြီးအသုံးမပြုခဲ့ရင်ပျောက်ဆုံးသွားမှာကိုကြောက်ကြတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည် သြစတြေးလျသွားထားရှိမည်ကတညျးတစ်နေရာရာမှာရက်သတ္တပတ်ခုနစျပါးတဝိုက်, သူ့ flatline အဆုံးသတ်နှင့်သူ၏လိင်စိတ် (နှင့်စိုက်ထူ) ပြန် လာ. ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုကတည်းက, အများအပြားယောက်ျားတွေမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြ သူတို့ရဲ့ flatline အတွေ့အကြုံများနှင့်၎င်းတို့၏ပြန်လည်ကောင်းမွန်။ ပြားချပ်ချပ်နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များကိုမျှဝေပါမည်။
နော Church ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှ - ငါ၏အလိင်တံကိုအစဉ်အမြဲ ကပ်. နှင့်ထုံမညျနညျး (ထို nofap flatline)
အဘယ်အရာ flatline ဖြစ်ပေါ်စေသည်?
ဘယ်သူမှမသိသေးဘူး ၎င်းသည်အစုအဝေး၏အချက်အလက်များစုစည်းခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာဖွယ်ရှိသည်။ အကယ်စင်စစ်လူတိုင်း၏ Flatline ပြင်းထန်မှုနှင့်ကြာချိန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အတန်ငယ်ထူးခြားသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Flatliner ၏ ဦး နှောက်ပတ်လမ်းကိုအခြေခံကျသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြောင်းလဲစေသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ မဟုတ်ရင်ကျန်းမာလူငယ်ယောက်ျားအတွက် abstinence ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ် မဟုတ် လိင်စိတ်အတွက်ပြင်းထန်တစ်စက်နှင့်ဆက်စပ်
1 ။ အဆိုပါ flatline ရိုးရှင်းစွာဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေတစ်မူကွဲလား?
ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး flatline စံဆုတ်ခွာဘလူး့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းခဲ့ယူဆ။ ပြန်လည်ထူထောင် porn စွဲအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြင်းထန်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့, မရမူးယစ်ဆေးစွဲမတူပဲ။ မည်သည့်စွဲလမ်းမှုကမဆိုဆေးစွဲနေသည့်အခါ ဦး နှောက်ဒေသများတွင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်အာရုံကြောနှင့်ဆဲလ်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီကက်စကိတ် ဆုတ်ခွာ-related neurochemical ပွောငျးလဲ ပါဝင်နိုင်ပါသည်:
drop-ချွတ်ဂါဘမြို့သားအတွက်, anti-စိုးရိမ်စိတ် neurotransmitter ဖြစ်သော
မြင့်မားသော dynorphin, dopamine ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းတုံ့ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေတယ်လေအရာ
ဤသည် combo ယာယီလိင်စိတ်ကိုသတ်နိုင်ဘူး။ ဒီထက် dopamine နှင့်အတူတစ် desensitized ဆုလာဘ် circuit ကို အမျိုးသားများအတွက်လုံလောက်သောနှိုးဆွပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ စိုက်ထူစင်တာများ ဦးနှောက်ထဲမှာ။ အဲဒီမှာလျော့နည်းဆွစိုက်ထူ enable လုပ်ဖို့ကျောရိုးကိုဆင်းခရီးသွားလာနည်းပါးလာအာရုံကြောကိုဆိုလိုသည်။
porn မလျော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်တဲ့သူမဟုတ်တိုင်းကောင်လေးတစ်ချိန်ချိန်လိင်စိတ်တစ်ဦးပြည့်စုံအရှုံးလည်းတွေ့ကြုံရသည်။ highspeed အပေါ်စတင်ခဲ့သူယောက်ျားတွေ ED ခံစားနေရသူတစ်ကြီးထွားလာသောအဘို့ကိုပါဝင်အဖြစ်သို့သော် flatlines သတင်းပို့သူမြား၏ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်နေသည်။
2 ။ အဆိုပါ flatline ကြောင့်အင်တာနက်ကို porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှထူးခြားသောဦးနှောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများပြောင်းလဲမှုများဖို့ရှိပါသလား?
ပထမဦးစွာအချို့သောနောက်ခံ။ အားလုံးစှဲအတူတူပင်ဖြစ်ပေါ်စေ ယေဘုယျဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ key မှာ ဦးနှောက်ဆားကစ်။ နာတာရှည်အကျိုးကိုစင်တာ (နျူကလိယ accumbens) တွင်မြင့်မားသော dopamine မှဦးဆောင် DeltaFosB ၏စုဆောင်းခြင်း, ထိုကဲ့သို့သော dopamine (desensitization) မှ sensitivity ကိုလျော့ကျလာသကဲ့သို့စွဲလမ်း-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲ။
သို့သော်သဘာဝဆုကျေးဇူး (အစားအစာ၊ ရေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်လိင်) တစ်ခုစီတွင် ဦး နှောက်တွင်သီးသန့် micro-circuit များပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အဝလွန်ခြင်းကိုအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းက ဦး နှောက်၏အစာကျွေးခြင်း၊ အဓိကကစားသမားမှာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအပါအ ၀ င်အရေးကြီးသောခန္ဓာကိုယ်လုပ်ဆောင်မှုများစွာအတွက်ပုလဲအရွယ်ထိန်းချုပ်မှုစင်တာဖြစ်သည်။
ဒါဟာ (ရှည်လျားသောရပ်တည်မှု porn စွဲအလားတူအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအုပ်ချုပ်ကြောင်းနက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံပွောငျးလဲကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်hypothalamus) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်စိုက်ထူရန်ကျိန်ဦးနှောက်ဆားကစ်။ ကျနော်တို့စိုက်ထူလိုအပ်ကွောငျးသိရ လုံလောက်သော dopamine ထဲမှာ ဆုလာဘ် circuit ကို နှင့် အ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများ။ မကြာသေးမီက အီတလီသုတေသီများ ' Psychogenic ED (ယောက်ျားခါးပတ်အောက်ပြ,နာများမှပေါ်ပေါက်လာသည့်အော်ဂဲနစ် ED) နှင့်ဆန့်ကျင်သောလူများ၏ ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စင်တာတွင်မီးခိုးရောင်အရာဝတ္ထုများ၏ကျုံ့ ၀ င်မှုကိုဖော်ပြသည် (နျူကလိယ accumbens) နှင့်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများ အဆိုပါ hypothalamus.
အာရုံကြောဆဲလ်တွေကို communicate ဘယ်မှာမီးခိုးရောင်ကိစ္စဖြစ်တယ်, ဒီထက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စနည်းပါးလာ dopamine ထုတ်လုပ်အာရုံကြောဆဲလ်များနှင့်နည်းပါးလာ dopamine-လက်ခံရရှိအာရုံကြောဆဲလ်ဖော်ပြသည်။ တနည်းအားဖြင့်လေ့လာမှု psychogenic ED ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ် မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ ဒါဟာအနိမ့် dopamine နဲ့ dopamine အချက်ပြဆင်းလာပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ငါသည်ဤဖို့ရှေ့ပြေးအတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရှေ့ဆက်ထားယူဆချက်နှင့်အတူဿုံ align porn & ED ဆလိုက်ရှိုး.
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏ overconsumption နှစ်ပေါင်းများစွာကတခြားစှဲအတွက်ပေါ်ပေါက်မနည်းလမ်းတွေထဲမှာ hypothalamus အတွက်အချက်ပြ dopamine အားနည်းသွားစေနိုင်သည်။ ထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများကျန်းမာလူပျိုတို့အတွက်ခေါင်းမာ ED (နှင့်ရှိနေဆဲဟု flatlines) အတွက်အကောင့်ကိုကူညီနိုင်ဘူး။
သေချာသည်မှာယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူအများစုသည်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များအားဆွဲဆောင်နိုင်မှု၊ လိင်ဆက်ဆံမှုအားနည်းခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းဖြစ်သည် (နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှု၊ အချို့သည်ပိုမိုပြင်းထန်သောအပြောင်းအလဲများကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
ကားလ်: ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါ့မှာခိုင်မာတဲ့စိုက်ထူမှုတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှအဲဒါကိုကျွန်တော်မသိဘဲနဲ့အားနည်းလာတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတွေနဲ့ငါ့ရဲ့စိုက်ထူမှုကငါ့ကိုကျေနပ်တယ်ထင်တယ်။
Jake: Porn သည်အမှန်တကယ်အားဆက်လက်နှိုးဆွမှုဆက်လုပ်ရန်စိုက်ထူရန်မလိုအပ်ပါ။ ငါ၏အ flaccidity ငါ့ ဦး နှောက်ရဲ့အပျော်အပါးလမ်းကြောင်းများနှင့်စိုက်ထူလမ်းကြောင်းများအကြားဆက်သွယ်မှုအားနည်းသွားပြီဆိုလိုတာကငါတွေးမိ။ ငါ့ ဦး နှောက်သည်စိုက်ကြည့်။ ပျော်ရွင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
3 ။ အဆိုပါ flatline ကြောင့်ဂန္ rewiring (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်) မှလား?
အင်တာနက် porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တဲ့ယောက်ျားတွေဟာ flatline ကနေအနာပျောက်အောင်အရှည်ဆုံးလိုတယ်၊ ဒါကသူတို့ကသူနဲ့မတူတဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်ဆိုတာပြနေတယ်။ အင်တာနက်အပြားပေါ်မှာစတင်ခဲ့သူအချို့ ကြုံတွေ့ရ သူတို့ရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူ၏ပထမတစ်နှစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့အဘို့။ ဒါကတကယ်မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်မဂ္ဂဇင်းများ၏စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ masturbating ထွက်စတင်ခဲ့သူကိုယောက်ျားတွေနှင့်အတူအမှုမဟုတ်ပါဘူး။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားများသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် စတင်၍ လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူများကိုလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိသည့်ဝါယာကြိုးများကိုဗီဒီယိုများ၊ အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်းများနှင့်ခရီးသွားတစ် ဦး ၏အမြင်အာရုံရှုထောင့်များကိုသာအသုံးပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ဦး key ကိုပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပါသည် နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေရဲ့ဦးနှောက်အခါ သူတို့ရဲ့မိတ်လိုက်အပြုအမူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရစေတယ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တွေ့ရှိရမှုတွေကိုနှိုးဆွရန်။ ထို့နောကျဦးနှောက်အသုံးမပြုတဲ့ circuitry-ဖြစ်ကောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအလွန် circuitry ကွာသုတ်သင်ရန်စတင် စစ်မှန်သောလက်တွဲဖော်များလိုက်စားဒီယောက်ျားတွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေထဲကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်တီထွင်နိုင်ခဲ့တယ်။ (ပိုမိုသိရှိရန် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်.)
တိ: သင်စဉ်းစားရမည့်အရာမှာ“ ဘုရား၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ED သည်ပိုကောင်းလာသလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိပ်စက်နေခြင်းလော?” ဖြစ်သည်။ ငါလည်းစဉ်းစားမိတယ် အဖြေက 'ကြင်နာ'၊ သင်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်သင်ကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသောအရာမှာသင်၏ ဦး နှောက်ကဘာလဲ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်လိင်ကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏အဓိကနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးမပြုပါ။ အဆက်အသွယ်အစစ်အမှန်သည်“ rewiring” လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်သည်။ သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှန်တကယ်လိင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ သေခြင်းချုပ်ကိုင်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အကျွမ်းတဝင်ရှိသလား။ လိင်သည်ဤအရာနှင့်လုံးဝမနီးစပ်ပါ။ ၎င်းသည်ပြန်လည် rebooting နှင့် rewiring လုပ်ပြီးနောက်လိင်သည်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပင်စကားလုံးများကဖော်ပြရန်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် rewiring လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိတယ်။ sputter လုပ်ပြီး backfires အနည်းငယ်ရှိမယ်။ နောက်ဆုံးမှာ cylinders အားလုံးကိုသင်ပစ်မယ်။ အခုလား။ သုည ED၊ ငါတောင်စဉ်းစားစရာမလိုဘူး။ တကယ်တော့ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ အင်း၊ အခုထိမသွားသေးဘူး၊ ငါတောင်လိင်၊ ဝှဲ၊ ဟုတ်တယ်…အဲဒီမှာရှိနေသေးတယ်…ဟုတ်တယ်။
၄။ Flatline သည်သန္ဓေတည်ခြင်းမကြာခဏဖြစ်ခြင်းမှခန္ဓာကိုယ်၏ကြိုးပမ်းမှုသည်လား။
အများဆုံးခေါင်းမာ flatlines နှင့်အတူယောက်ျားတွေမကြာခဏမဟုတ်ဘဲ horniness ထက်, flatline ၏ပျင်းသို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ထဲက masturbating နှစ်သို့ကျဆင်းဖော်ပြရန်:
မှ Ian: ငါလုပ်ဖို့ပိုကောင်းဘာမျှခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့် porn လုပ်နေတာ, နှေးကွေးလိင်စိတ်၏ရှည်လျားသောအဆင့်ရှောက်သွားလေ၏။ ငါစာသားမျှမဘတ်ဇ်သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုခံစားရတယ်, နှင့်အဆုံးရလဒ် hit သို့မဟုတ်လွဲချော်ခဲ့သည်။
ဂျိမ်း: (အသက် ၁၉) ၆ တန်းကတည်းကတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ငါအခု fap ဖို့တိုက်တွန်းရဘယ်တော့မှ။ ငါ 'တခုခုကိုပွတ်သပ်' နိုင်မယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာအကန့်အသတ်မဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ် လူတွေတော်တော်များများဟာအချိန်တိုင်းလိင်ဆက်ဆံကြပြီး ED မဖွံ့ဖြိုးဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ငါဟာနေ့တိုင်းညစ်ညမ်းတဲ့ပမာဏကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုပြီးသာမာန်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံယူတဲ့ငါ့ရဲ့လူအနည်းငယ်လောက်ကိုငါသိတယ်။
Tyler: ငါကောလိပ်တက်ခဲ့တယ်၊ အချိန်တော်တော်များများရှိပြီးငါ့ကောင်မလေးနဲ့လည်းဝေးခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါအများကြီးကြည့်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့လုံးရုတ်တရက်ဆိုသလိုကျွန်တော်ဆက်မနေနိုင်တော့ဘဲလိင်စိတ်နည်းနေသည့်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်တော့ပါ။ ထိုအခါမူကားငါခံစားခဲ့ရပြီးပိုမိုဆိုးလာသည်နှင့်အမျှဒစ်ခ်ျမှေးမှိန်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းကအမှန်တကယ်ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီး ထပ်မံ၍ စောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့၊ ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ နောက်တစ်ခါမထွက်တော့ဘူးဆိုတာကိုသိပြီးနောက် ၈-၁၀ ရက်အကြာမှာငါဟာ libido အရိပ်အမြွက်တစ်ခုစတင်ပြီးနောက်တဖန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုလိမ့်မယ်။ ၆ နှစ်လုံးလုံးအပြားပြားထဲကနေဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်လာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြောင်းလာပါတယ်။
အထီးကြွက်အပေါ်သုတေသန သာမန်မွတ်မပြေ၏အမှတ်ထက်ကျော်လွန် ejaculating ပိုလျှံမှမူးယစ်ဆေးဝါးများကို အသုံးပြု. ကြွက်တွင်တွေ့မြင်တူညီတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ဦးနှောက်ကိုအပြောင်းအလဲအချို့ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းပြသထားတယ်။ သုတေသီများယုံကြည် အပြောင်းအလဲများသည်အလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်းကိုတားဆီးသည့်သဘာဝအကာအကွယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် (အကောင်းဆုံးအားဖြင့်) ဘရိတ်ကိုယာယီအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်နှင့်အမျှအန်ဒရိုဂျင် (testosterone) receptors များအကြီးအကျယ်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အီစထရိုဂျင် receptor များမှသိသိသာသာခုန်မှုတို့သည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ကွင်းဆက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများတွင်ဖြစ်ပွားသည်။
porn အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏သဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုယန္တရားများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏အကူအညီဖြင့်တသမတ်တည်းကျော်လွှားသောအခါသူတို့၏ ဦး နှောက်တွင်အလားတူပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ဒီအလေ့အကျင့်ဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ Mojo ကိုကုစားဖို့အချိန်ယူတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ရိုးရှင်းစွာဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်။
ဂျက်ဖ်: ကျွန်တော့်သီအိုရီ - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကတည်းကစပြီးစတင်ခဲ့ပြီးစိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမကုန်မှီတိုင်အောင်အရူးကဲ့သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သငျသညျမောမောသောအခါ, သင့် ဦး နှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်လှုံ့ဆော်မှုကိုပြန်တုံ့ပြန်နိုင်အောင်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက် (ငါတို့ Flatline ဟုခေါ်သည်) အိပ်စက်ခြင်း mode ကိုဝင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုအနားယူခွင့်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အရာရာပုံမှန်ပြန်မလာခင်ရက်အနည်းငယ်လောက်မှာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါတို့မူကား၊ ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်နေသော်လည်းအောက်ခြေအထိရောက်သည်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အခုတော့အရာရာပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ရက်အနည်းငယ်လောက်တော့ကြာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့ကိစ္စများတွင်လအနည်းငယ်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်ပင်ကြာလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ပြီးသွားမှာပါ
မဟုတ်လူတိုင်း flatline လွဲတွေ့
ချဒ်: အလိုဆန္ဒကိုလွှတ်လိုက်ခြင်းကကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းဆန္ဒရှိလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူအောင်မြင်လိုသည်မှာပါ။ ငါသူတို့ကိုအိပ်ရာထဲထည့်စရာမလိုဘူး သူတို့နှင့်အတူပျော်စရာကောင်းပြီးပတ်ပတ်လည်အရူးလုပ်ခြင်းသည်အောင်မြင်ပြီဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းမများတန်ဖိုးထားပုံရသည်။ ထိုအခါငါအလှည့်, အရင်ကထက်အမျိုးသမီးအဆက်အသွယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၌များစွာကူညီသည်။
ဆာဂျီယို: ကျွန်ုပ်၏ Flatline ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံမှန်ဖြစ်မှုကိုရှာဖွေရန် ဦး နှောက်ကိုသဘာဝတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်နားလည်သည်။ အဲဒါကိုသိရင်ငါက Flatline ကိုသဘောကျတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့လိင်မှုကိစ္စကငါ့ကိုမထိန်းချုပ်ဘူးလို့ခံစားရတယ်။ ငါလိင်နှင့်မိန်းမများထက်အခြားအရာအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအပူတပြင်းတွန်းအားထက်ပိုကောင်းတယ်။
Josh: ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျနော် flatlines ၏ scariest အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကသငျ့ကိုတိုကျတှနျးမပါဘဲဖြစ်ကြပြီးအမှန်တကယ်မပါကြားခံ, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်သိမ်များကထွက်ပေါက်မရှိထင်ယောင်ထင်မှားနှင့်အတူဘဝကိုရင်ဆိုင်ရသောအချက်ဖြစ်ပါသည်ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်မရဲ့အလုပ်ထွက်ပြီးတစ်နှစ်ချွတ်အများစုကိုယူသည့်အခါငါ့ကိုသတိပေးနေပါတယ်။ လကိုပထမဦးဆုံးစုံတွဲအဘို့, ငါတကယ်စိုးရိမ်ရက်ပေါင်းရှိလိမ့်မယ်။ ကျွန်မစဉ်းစားနိုင်အားလုံးနောင်တနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်-ifs ခဲ့ကြသည်။ ကြောင်းအာရုံမပါဘဲသူတို့အားပြဿနာများအားဖြင့်ပြုပြင်ခက်ခဲပေမယ့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။
Toby: ကျွန်ုပ်တို့ကဤမျှကာလပတ်လုံးဝယ်ခဲ့သောမုသာကိုဖျက်ဆီးပစ်သောကြောင့်၊ သူသည်အမြဲတမ်းလိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည့်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ မိတ်ဖက်ပေါင်းများစွာ၊ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ချိန်တည်းတွင်မိန်းမများသည်လိင်တံတောင်းစားနေခြင်း။ သူသည်မည်သူမဆိုအိပ်ရာဝင်နိုင်ပြီးသူမအားလိင်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောသူတစ် ဦး အဖြစ်ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲလမ်းမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအချိန်များစွာစောင့်ကြည့်ကြသည်။ မျဉ်းဖြောင့်သည်အမျိုးသားများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနယ်မြေဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပြန်လည်ထိန်းညှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
တသမတ်တည်းရှိစေသတည်း။ (အမြန်ဆုံး recover သူများသည် "reboot လုပ်ပါ") ဒီတော့ထွက်စတားမင်းသမီးနှင့်အတူ sexting, Facebook, Craigslist နှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ trolling, porn စိတ်ကူးယဉ်ညစ်ညမ်းရှောင်ရှားအတွက်တသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ။ တချို့ကအကြီးအကျယ် (ယာယီ) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။
အင်တာနက်က porn မှ Edging 1) အင်တာနက်ညစ်ညမ်း ED စေပုံနှင့်, 2) dopamine အဆင့်ဆင့်ပုံမှန်အားကလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည့်အလွန်ရှည်လျားသောကာလများအတွက်တိုးမြှင်ကြောင့်အော်ဂဇင်မပါဘဲ, အထူးသဖြင့်ထိခိုက်ဖြစ်ပါသည် desensitization.
porn နှင့်အတူစမ်းသပ်မထားပါနဲ့။ သင့်ရဲ့လိင်စိတ် flatlines, သို့မဟုတ်သင်ကဲ့သို့သောအခြားအလက္ခဏာတွေရှိသည့်အခါ "ကျမဲ့လိင်တံ," ကစိုးရိမ်ထိတ်လန်နှင့်သင်နေဆဲတစ်ခုစိုက်ထူအတင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ porn နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ချင်မှလွယ်ကူသည်။
Jed: သင့်ရဲ့စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတင်းအကျပ်သို့မဟုတ် "စစ်ဆေးခြင်း" တန်ပြန်သည်။ ဆယ်ယောက်အနက်ကိုးကြိမ်သည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်မတူပါ။ လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သင်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုတာက၊ သင်လိင်တံကပင်တုံ့ပြန်သင့်သည့်အတွေးမျိုးကိုသင်အမှန်တကယ်မစဉ်းစားတော့ပါ။ ယုတ္တိဗေဒသည်သင်ကိုယ်တိုင်“ စစ်ဆေး” ရန်မည်မျှမှားကြောင်းသင်ချိုးဖောက်လေလေ၊ သင်ပိုမိုနားလည်လာလေဖြစ်သည် အတင်းအကျပ်စိုက်ထူ သုညရည်ရွယ်ချက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုသင်စိတ်ပျက်အားလျော့။
စိတ်ရှည်ပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သင်သည်ပေးသည်အထိစာအုပျထဲမှာရှိနေဆဲ သင့်ဦးနှောက်နှင့်လိင်တုန့်ပြန်ကျောပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းဆိုင်းဘုတ်များ, သို့မဟုတ်သင်သတိမရမှီတိုင်အောင်သင့်လိင်စိတ်ကိုစတင်ရန်အချိန်ဖြစ်သည် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ။ ဤအတောအတွင်းသင့်စိတ်ကိုထိန်းညှိရန်သင်အကူအညီလိုပါကအားစိုက်သောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ၊ ပရောပရည်လုပ်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ အအေးရေချိုးခန်း regimen.
ယခုအချိန်တွင်ရောက်ရှိသောအခါ overdo မထားပါနဲ့။ သငျသညျပုံမှန်သုတ်ရည်လွှတ်မှုကိုပွနျဖွစျပှားဖို့ဆုံးဖြတ်တစ်ချိန်ကလွယ်ကူသောကြောင့်ယူပါ။ လျင်မြန်သောဆက်ခံအတွက်အများအပြားသုက်ယောက်ျားတွေစေလွှတ်ပြီ ကျောတစ် flatline သို့။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ခြေကျင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါကသင်၏ချိုင်းထောက်များကိုစွန့်ခွာပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် ၆ နာရီအပြည့်ဘတ်စကက်ဘောဘတ်စကတ်ဘောကစားခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါသလား။ အစပိုင်းတွင်မည်သည့်အော်ဂဇင်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုကအားကောင်းစေနိုင်သည်Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု, "နှင့်ရလဒ်တစ်ခု porn မူးယစ်လျှင်, သူကပြန်လည်နာလန်ထူနှေးကွေး။ တစ်ဦးတည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ပြင်းထန်သောဆွခြင်းမရှိဘဲ, ကလျော့နည်းပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတောင်နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
တခြားသူတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ ပထမ ဦး စွာ ဦး နှောက်သည်သူတို့၏ sensitivity နှင့်ကွဲပြားသော dopamine (stimulation) အပေါ်တုန့်ပြန်မှုကွဲပြားသည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးဟန်ချက်ညီစေရန်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ပိုမိုလိုအပ်နိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် desensitization ဖြစ်ပေါ်စေသောနံနက်ခင်းအပန်းဖြေမှုတုံ့ပြန်မှုသည်နာရီပေါင်းများစွာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ပါ သုတေသနအရသိရသည်။ ၎င်းသည်“ အတွေ့အကြုံပြင်းထန်ခြင်း” နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
သင့်ရဲ့ flatline လအကြာတိုးတက်အောင်သည်မဟုတ်, သင်ဖမ်းများမှာခံစားရပါလျှင်, ကန်-စတင်သင့်ရဲ့လိင်စိတ်စမ်းပါ။ သငျသညျအငျတာနကျ porn နှင့် / သို့မဟုတ်သေခြင်းတရား-ချုပ်ကိုင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းထက်အမှန်တကယ် (အလားအလာ) အိမ်ထောင်ဖက်မှဝါယာကြိုးရန်သင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုအသုံးပြုလျှင်, သင်နောက်ဆုံးမှာတက်သည်ဖြစ်စေလိုအပ်နိုင်ပါသည် သငျသညျလွဲချော်လေ့ကျင့်ရေး။ သငျသညျမြျှောလငျ့ထားစေခြင်းငှါ, အမျှဒီလိုလုပ်ဖို့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုချစ်ခင်အဆက်အသွယ်အများကြီးထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်သူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချဖက်နဲ့ဆက်ဆံရေး၌တည်ရှိ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတောင်းဆိုမပါဘဲ.
(နောက်ဆုံးတွင်) ထိ, မစိတ်ကူးယဉ်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင် (သေချာပေါက်အထွတ်အထိပ်မှမဟုတ်) စွမ်းအင်ကိုစောင်ရေလေ့ကျင့်ခန်း, ရေချိုးခန်းအတွင်းပုံမှန်ကာမဂုဏ်လိင်အင်္ဂါ Self-နှိပ်ခံခြင်းသို့မဟုတ်: သို့သော်လည်းယောက်ျားတွေလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေအမျိုးမျိုးသောသည်အခြားနည်းစနစ်တွေ့ပြီ (porn / ညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်မပါဘဲ) အထွတ်အထိပ်မှရိုးရှင်းစွာတဦးတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ခုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ။ ပိုပြီးအကြံပြုချက်များများအတွက် ဒီချည်သွားရောက်ကြည့်ရှု.
မာကု: နေ့ ၁၂၀ မှာကျမရင်ဖွင့်နေတုန်းပဲ။ ငါစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်နဲ့စိတ်ကူးယဉ်ရုံနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ငါ့လက်နှင့်အလွန်အလင်းလေဖြတ်။ ကြောင်း anaconda- ဆုတ်ထားတာအဘယ်သူအားမျှ။ ဒီစမ်းသပ်မှုရဲ့အဓိကအချက်ကငါခံစားချက်အပြင်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမှမရှိဘဲငါခက်ခဲနိုင်မရသိမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ကောင်းပြီ၊ ငါအရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ ၂ စက္ကန့်လောက်အကြာမှာကျွန်တော်အရမ်းကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်၊ ကျွန်တော်မရှည်ခဲ့ဘူး ၄ လနီးပါးလောက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ကွန်ဒုံးနဲ့ထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါ ဦး ။ ကောင်းပြီ၊ ကွန်ဒုံးကိုပြonနာမရှိဘူး၊ မပြီးမီနဲ့ပြီးနောက်မှာအရမ်းခက်နေတုန်းပဲ၊ ကွန်ဒုံးမှာပြfinishingနာမရှိဘူး။ သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားစေတဲ့သူတွေအတွက်သင်ဟာလုံးဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်ပြီးမသိသာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ လအနည်းငယ်အကြာမှာ ၂၄/၇ ပတ်လည်မှာစိုက်ထူပြီးလမ်းလျှောက်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့က ၁၅ နှစ်မဟုတ်တော့ဘူး ငါတကယ်တော့ဆရာဝန်တစ် ဦး ကိုသွားတွေ့ဖို့နဲ့ငါ့ရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုစစ်ဆေးဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကကျွန်တော့်ကိုဒေါ်လာရာဂဏန်းသက်သာစေခဲ့တယ်။ ကျွန်မမှာကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာအခုသိပြီ ဒါကိုရက် ၆၀၊ ၉၀ ရက်မှာစမ်းကြည့်နိုင်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာကိုမပြုလုပ်နိူင်ပါကစိုက်ထူခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ သင်ကုသရန်အချိန်ပိုလိုအပ်သည်။
Dave: လိင်မှုကိစ္စဟာအရင်ကမခံစားရဘူးလို့ခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလိင်ဆက်ဆံနေတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားတစ်ယောက်နှင့်စူးစမ်းရန်ကစားကွင်းအသစ်တစ်ခုရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ Porn ကငါ့ကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်ဖို့ကျွန်မတစ်ခါမှမကြံစည်ခဲ့ပါ၊ သို့သော်သူမပျင်းနေခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုလွှတ်ပေးရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သေချာပေါက်လေ့လာခဲ့သည်။ ငါသည်ဤနံနက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနှင့်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သွားရသောရက်ပေါင်း ၉၀ အတွက်နောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားခြင်းမှကျွန်ုပ်၏လိင်တံတွင် sensitivity ကိုပြန်လည်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ပြန်လာတာသေချာပါတယ်။ ငါကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်သေချာပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လူအချို့ကပြုလုပ်ရန်မလွယ်ကူလှပါ။ ၎င်း၏နေရာနှင့်အချိန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၉ နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုစတင်ဝင်ရောက်စပြုနေပြီဟုခံစားမိသည်။ အနာဂတ်မည်သို့ဖြစ်လာမည်ကိုမစောင့်နိုင်ပါ။
Grant က: ငါ၏အလိင်တံအဘယ်သူမျှမဘဝမှာရှိခဲ့လျှင်အဖြစ် 1 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်ကြောင့်ခံစားရတယ်။ ကအခြေခံအားဖြင့်သေကြောင်းကို။ ငါငရဲအဖြစ်ကြောက်လန့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်နှစ်သုံးပတ်ပြီးနောက်, နံနက်စိုက်ထူပြန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က (သာ 20% လိုမျိုး) မှာအားလုံးခိုင်မာတဲ့မဟုတ်ကြပေမယ့်သူတို့ကတိုးတက်ခဲ့ကြပြီးကိုယ့်ကိုသူတို့မှန်မှန် [တစ်လမှာ] 70% ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။
Dietmar: ငါချိန်းတွေ့ခြင်း, တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn အသုံးပြုမှုအကြားအချို့သောချိန်းတွေ့, masturbation နှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူ, 10 လကြာဒီအချွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ယခုငါတကယ်တိုးတက်မှုခံစားနေပါတယ်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်ရန်လိုမှုလျော့နည်းလာပြီးပထမဆုံးရက်အနည်းငယ်အတွင်းအတိတ်မှအနမ်းများမပျောက်နိုင်ပါ။ ပထမအကြိမ်သို့မဟုတ် ၂ ရက်အကြာတွင်အပြားပြားသို့မခွာခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၁ ရက်မှစ၍ နံနက်ခင်းတွင်တသမတ်တည်းရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဒစ်ကနောက်ဆုံးတွင်“ ငါ့မှာလန်းဆန်းတက်ကြွနေတယ်။ သွားရန်!"
ကျွန်မဖတ်ပါ: လွန်ခဲ့သော ၁၄၆ ရက်ကကျွန်ုပ် NoFap ကိုစတင်ခဲ့သည်၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း၊ အရက်မူးခြင်း၊ ငါရရှိခဲ့သောချက်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးများမှာစွမ်းအင်တိုးများလာခြင်းနှင့် hyperactive ခံစားမှုတစ်ချိန်လုံးတိုးလာသည်။ ဤသည်မှာ ၂ ပတ်လုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ ငါ ၁၅ ရက်ကနေ ၄၅ ရက်အထိ flatline ကိုရောက်သွားတယ်။ ၆ လမှ ၇ နှစ်အတွင်းငါမြင်တွေ့ခဲ့ရသောပထမဆုံးစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ အရာရာတိုင်းသည်ထိုအချိန်မှ စ၍ တဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားလာခဲ့ပြီးအလွန်ကောင်းသည်။
Kent: ၈ ပတ်လောက်မှာငါအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ libido မခံစားရဘူးဆိုရင်ငါတော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့တယ်၊ ဆက်လုပ်ပါ၊ နောက်ဆုံးသင်ပြန်လာမည် ငါတကယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့နေပြီးတဲ့အထိပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့မခံစားရဘူး။ သူကဂိတ်တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ယခုနှင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာအကြားတိုးတက်မှုလုံးဝရူးသွပ်သည်။
ပညာရှင် Hans: (အသက် ၂၁ နှစ်) ကျွန်ုပ်သည်ဤမိန်းကလေးနှင့်မတွေ့ဆုံမီကျွန်ုပ်သည်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ သူသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တခါတလေအဲဒီမှာခေါင်းကိုက်တာမျိုးခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါပဲ။ သော်လည်းလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်, ငါတစ်ခါတစ်ရံသူမ၏ကိုင်ပြီးရုံစိုက်ထူရ။ သူမကိုကြည့်ရင်တောင်ငါ့ကိုသွားတွေ့တယ်။ ငါတို့ထဲမှအချို့သည်ကွဲပြားစွာတည်ဆောက်ပြီးလိုအပ်သည်ဟုထင်သည် တစ်ကယ့်မိတ်ဖက် တကယ်အသက်ပြန်ရှင်ဖို့လိင်စိတ် start ခုန်ရန်။
သင်သည်အသက်တာ၏လက္ခဏာများကိုစတင်သတိပြုမိပြီးနောက်၌ပင်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်မတိုင်မီ၎င်းတို့အားအိပ်စက်ခြင်း - လစ်ဘိုက်အဆင့်ဆင့်ဖြင့်လိုက်လံကြည့်ရှုခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ တိုးတက်မှုများကိုလပေါင်းများစွာသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြန်လည်နာလန်ထူမှု၏မကြာခဏနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုမှာအထွတ်အထိပ်အလွန်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအုတ်တံတိုင်းလျော့နည်းလာခြင်းဖြစ်သည်။
ရော့: ငါ PMO မရှိသည့် ၅၆ ရက်ကိုဖြတ်သန်းပြီး၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက်ဗလာ၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ဒါပေမယ့်ဘာထင်လဲ ဒီခြောက်လကြာတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါဟာနုပျို / ကျပန်းစိတ်ကျဆင်းမှုကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးလို့နောက်ဆုံးမှာပြောနိုင်ပါတယ်။ ဦး နှောက်မြူမှုန်လေးကအခုကျွန်မရဲ့တစ်ခုတည်းသောလက္ခဏာပါ။
Ahmed က: [ပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်] မနေ့ကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်နေတာသူမကကျွန်မကိုစနမ်းလာတယ်။ ငါခက်ခဲခဲ့တယ်၊ ငါကမတူကွဲပြားတဲ့စိုက်ထူမှုတစ်ခု၊ စိုက်ထူဟောင်းတစ်ခု၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးနိုးကြားနေပြီးဘာကိုမှန်းဆမှန်းငါသိတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ED မပါဘဲ၊ စိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးသူမကကျွန်မရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူသစ်တစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါတောင်မှလူသစ်တစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ လိင်ဟာမြူခိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ အော်ဂဇင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ငါဟာစိတ်ကျေနပ်မှုရရုံသာမက ၀ မ်းနည်းမှုလည်းမရှိခဲ့ဘူး။
Flatline ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာစရာများစွာရှိသေးသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံစာများသည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအကောင်းဆုံးအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကြသော်လည်းယနေ့လူငယ်များသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပိုမိုကြာရှည်ရန်လိုအပ်သည်။ In ဒီဗီဒီယိုတစ် 25 နှစ်အရွယ်လိုအပ်သော9လအတွင်းပုံမှန်အားတုံ့ပြန်ရန်အိပ်ရာ-သူတစ်ဦးရည်းစား၏ဇိမ်ခံရှိခဲ့ပါတယ်။
Glen: လူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ တချို့ကယောက်ျားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာနေတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစွဲလမ်းမှုကအသစ်အဆန်းဖြစ်နေလို့ဘာကိုမှန်းဖို့ခက်တယ် နှစ်နှစ်လောက်အကြာမှာငါတို့ခေတ်ရေစီးကြောင်းအချို့ကိုစတင်တွေ့မြင်ပြီးနုတ်ထွက်လိုက်သောသူတို့အားကောင်းသောအကြံဥာဏ်များပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့ဒီတွင်ရှေ့ဆောင်များ။
တစ်ဦးကယောက်ျားတစ်ယောက်သည်အခြားဖိုရမ်ပေါ် flatline ကရှင်းပြသည်
၎င်းကိုအဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်တွေ့ကြုံပြီးနောက်ငါပြောတာကပြားဆွဲခြင်းဟာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၊ ဘယ်သူမှရှင်းပြလို့မရဘူးဆိုတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်။ သင်၏ဟော်မုန်းနှင့် neurotransmitter အဆင့်ကိုပုံမှန်ပြန်ရောက်ရန်လိုအပ်သောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါ dopamine အဆင့်များသည်မြင့်တက်လာသည်။ သို့သော်သင်သုက်ထွက်လာသည်နှင့်အမျှ prolactin သည် dopamine အဆင့်များအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အဆိုပါ Flatline ရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားကိုလိုက်စားရန်အလိုရှိကြသည်တွင်၏ဖယ်ရှားခြင်း, သင်တို့ကိုလွှဲပြောင်းယူရုံပါပဲ။ မင်းကိုမလိုချင်ဘူး၊ မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသင့်ကိုခွင့်မပြုလို့မဟုတ်ဘူး။ သင် ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုကို အသုံးပြု၍ ညစ်ညမ်းသောမည်သည့်ညစ်ညမ်းမှုကိုမဆိုအသုံးပြုသည့်ပျက်စီးနေသည့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုကုသပေးသည်။ အချိန်လိုတယ်၊ ထိမိတဲ့အခါကြောက်မနေပါနဲ့။ သင်သတိထားမိပါကပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင် flatline နေစဉ်အတွင်း, လိင်တံ၌မခံစားမှုလုံးဝနီးပါးရှိ၏ ဆိုလိုသည်မှာစိုက်ထူခြင်းမရှိ၊ အရာအားလုံးအလုပ်လုပ်နေလားဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ fap လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာကိုသင်ခံစားရလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးမပြုပါ၊ ၎င်းသည်လူတို့၏အကြီးမားဆုံးအမှားဖြစ်သည်။ ထိုအခါသင်သည်တော်တော်များများဆိုလိုသည်မှာသင်သည် 45 ရက်မျှအချည်းနှီးဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်
ပြန်လည်ကောင်းမွန်အသုံးပြုသူများထံမှ Flatline အကွံဉာဏျ
ငါရှိသောကြောင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဤ 90 နေ့ကကာလစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မစတင်ရှေ့၌ငါတကယ်အနည်းငယ် flatlining ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါတီထွင်ခဲ့ရုံအလေ့အထကြောင့်ငါ masturbating ထားရှိမည်။ Flatlines တစ်ဦးရောနှောကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမတသူတို့ကိုယ်သူတို့ castrate ဖို့ရှာဖွေနေ nofap မှကြွလာနှင့်တစ်ဦး flatline ကဲ့သို့ခံစားရအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင့်ကိုယ်သင်သလောက်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံတှေ့ရပါဘူးကတည်းကကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူမယ့်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ခိုင်မာတဲ့ထိုးနှက်သည်။ ကမ္ဘာကြီးဟာအရုဏ်မတတ်မီကမှောင်လာပြီအတိုင်းဤမွငျသငျသညျကွောငျ့, ED ၏ဒီမှာပါလျှင်, သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်မြင့်မားတဲ့မပေးကြောင်း, နားလည်ပါသည်။ ဒါဟာရှောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ငါတကယ်ကလျော့နည်းသဘာဝကျကျ pass ကိုကူညီမယ့် subliminal စာတိုပေးပို့ရေးတိပ်ဝယ်, မလွန်မယ်လို့မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါတိပ်ခွေမကူညီခဲ့ဘူး။ Nofap အကူအညီနဲ့ပြုလေ၏။ သို့သော်နေဆဲ 90 ရက်အကြာတွင်စိုက်ထူငါ၏အတှေ့အကွုံကငါ masturbating အခါများကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်အရာကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျွန်မနံနက်သစ်သား, မဟုတ်သည်နံနက်တိုင်းရ, ငါသည် 19 ခဲ့ကတည်းကတိုင်းနံနက်ကရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ငါသာငါရထားပေါ်တွင်လှပသောဆံပင်ရွှေရောင်မိန်းကလေးဘေးတွင်ထိုင်နေစဉ်ထဲမှာ 55 ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုပိုကောင်းလာပြီသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေထောက်ထိခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါလိုသကဲ့သို့ငါထွက်ဆန့်ခဲ့ပါတယ်, သူနောက်ကျောကိုငါ့လက်မောင်းသို့မြှောင်ကြောင့်ငါ့လက်ရုံး, သူမ၏ထိုင်ခုံန်းကျင်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူစိမ်းမှလာမယ့်စီး၏ကြာချိန်အဘို့ခိုင်ခံ့စိုက်ထူ။ စိုက်ထူကောင်းသောအရာဖြစ်ကြ၏, သူတို့သင်တစ်ဦးရထားချွတ်ရမှတက်ရပ်နေင့်သည့်အခါကဲ့သို့ပင်အချိန်များတွင်မသက်မသာဖြစ်စေခြင်းငှါသော်လည်း, သူတို့သည်ပြဿနာတစ်ခုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသတိရပါ။ သူတို့ကသင်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လျက်ရှိဖြစ်ကြောင်းဇီဝသက်သေဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျ nofap နှင့်အတူကပ်လျှင်, သင့်သည့်သဘာဝဇီဝအပြုအမူတွေကိုသင်တို့ဆီသို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
Flatlines အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်ရပါမည်။ ဒါဟာလဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဖြစ်ခက်ခဲရုံသင့်ရဲ့ဘောင်းဘီအတွင်း flaccid လျစ်လျူရှုပြီးကိုယ့်ကိုယ်အာရုံစိုက်ပါ။ သငျသညျယခုအပိုအချိန်ရှိသည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ အစီရင်ခံစာ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၁၆ - ရက် ၉၀ အစီရင်ခံစာ
အဆိုပါ Flatline - ရက်ပေါင်း ၅၀ လောက်မှာစခဲ့ပြီးရက်ပေါင်း ၃၀ လောက်နေခဲ့တယ်။ ဤအချိန်ကယ့်ကိုတကယ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ငါလုပ်နေတုန်းပဲလားကြည့်ဖို့ fap လုပ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဆက်နေပြီးဒီ post ကိုရေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ fuck ဆိုတဲ့ဘုရားလိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ။
အများအားဖြင့် Redditor ၏ Self- အစီရင်ခံစာများစုစည်းခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်
တစ်ဦး Reddit flatline ဆွေးနွေးမှုမှ Link ကို
yourbrainonporn.com အပေါ်ပစ္စည်း flatline မှ Link ကို